के नेपालले साफ च्याम्पियनसिप उपाधि जित्ला ? नेपाली प्रशिक्षकले खुलाए यस्तो रहस्य -
काठमाडौं – माल्दिभ्समा भइरहेकाे साफ च्याम्पियनसिप २०२१ अन्तर्गत आफ्नाे तेस्राे खेलमा नेपालले आइतबार भारतसंग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
शनिबार भएकाे प्रि म्याच कन्फ्रेन्समा नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले भारत बलियाे टिम भएकाे र खेल कठिन हुने बताए । ‘भारत बलियाे टिम हाे तर यसकाे अर्थ हामी फाइट गर्दैनाैं भन्ने हाेइन । भारतलाई हामी सम्मान गर्छाै। हामी भारतविरुद्ध फाइट पनि गर्छाैँ’ उनले भने ।
नेपाल भारतबीचकाे खेल मालेस्थित नेशनल रंगशालामा नेपाली समय अनुसार खेल राति ९:४५ बजे सुरु हुनेछ । भारतले सर्वाधिक ७ पटक साफकाे उपाधि जितिसकेको छ । तर ५ राष्ट्र सहभागी यस संस्करणकाे साफमा भने भारत सुरुवाती दुवै खेलमा बराबरीमा राेकिएकाे थियाे ।
नेपालले भने दुव‌ खेल जितेर ६ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ । भारतविरु’द्ध जीत निकाल्न सकेमा नेपाल एक खेलअघि नै फाइनल पुग्नेछ । यस्तै अलमुताइरीले नेपाल अहिले नै फाइनल नपुगेकाे भन्दै समर्थकलाई संयमित रहन पनि आग्रह गरेका छन् ।
नेपालका कप्तान किरण कुमार चेम्जाेङले भारत विरु’द्धकाे खेल महत्वपूर्ण रहेकाे भन्दै हरेक पाइला साेच विचार गरेर चाल्नुपर्ने बताए । यस्तै भारतका प्रशिक्षक इगाेर स्टिमेकले भारतकाे लक्ष्य साफ जित्नु नै रहेकाेले मानसिकतामा परिवर्तन नभएको बताए ।
साथै उनले नेपालले राम्राे खेलिरहेकाे भन्दै ६ अंकका लागि लायक रहेकाे समेत बताए । पहिलो खेलमा माल्दिभ्सलाई १-० ले हराएको नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलंकालाई ३-२ ले हराएको थियो ।
भारत भने पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग १-१ र दोस्रो खेलमा श्रीलंकासँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो । नेपाल २ खेलमा ६ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा छ । बंगलादेश ३ खेलबाट ४ अंकसहित दाेस्राे स्थानमा छ । भारत २ खेलबाट २ अंकसहित चाैथो स्थानमा छ । आइतबारै घरेलु टाेली माल्दिभ्सले श्रीलंकासंग खेल्नेछ ।
यस्तै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरण चेमजोङले भारतविरु’द्ध आइतवार हुने खेलका लागि राम्रो तयारी गरिएको बताएका छन् ।माल्दिभ्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत आइतवार हुने खेलअघि शनिबार आयोजित प्रि-म्याच कन्फरेन्समा उनले बलियो टिमलाई हराउन राम्रो तयारी गरेको बताए ।
‘हामीले राम्रो तयारी गरेका छौँ। प्रशिक्षकले भने जस्तै भोलिको खेल कठिन छ। हामी चरणबद्ध अघि बढिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘हामीले दुई चरण पार गरिसकेका छौँ। लक्ष्य पूरा गर्न भोलि अर्को चरण छ। हामी जितकै लागि ९० मिनेटसम्म खेल्छौँ।’
गोल किपरसमेत रहेका किरणले साफ जित्ने सपना पूरा गर्न नेपालका लागि भारतविरु’द्धको खेल महत्वपूर्ण रहेको बताए।
‘सपना देख्नु पर्छ। सपना देखेर मात्रै लक्ष्यमा पुगिन्छ। मेरो मात्रै होइन, सारा नेपाली र फुटबल फ्यानको सपना हो’, उनले भने, ‘सपना पूरा गर्न हामी हरेक दिन फाइट गरिरहेका छौँ। भोलिको खेल हाम्रो लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ। त्यो सपना पूरा गर्न हामी सक्दो प्रयास गर्छौँ।’
किरणले यो पटक साफमा नेपाली टिम अन्डर डग टिम रहेको पनि बताए। ‘प्रशिक्षकले उनीहरु साफ क्षेत्रमा बलियो टिम रहेको बताएका छन्। तर, यसको मतलब यो होइन, हामी राम्रो टिम होइनौं’, उनले भने, ‘हामी यस प्रतियोगिताको अन्डर डग टिम हौँ। हामी हरेक खेलमा जित्ने गरी खेल्छौँ।’
नेपालले अहिलेसम्मका दुवै खेलमा जित दर्ता गराएको छ। पहिलो खेलमा माल्दिभ्सलाई १-० ले हराएको नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई ३-२ ले हराएको थियो।
भारत २ अंकसहित चौथो स्थानमा छ। भारतलाई फाइनल पुग्न बाँकी दुवै खेल जित्नुपर्ने दबाब छ। पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग १-१ गोलको बराबरी गरेको भारतले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग गोलरहित बराबरी नतिजा निकाल्यो।
विश्वकप जितेपछि लगाएको जुत्ता खोलेर त्यसैमा र क्सी हालेर पिए, किन गरिन्छ यस्तो ?
न्युजिल्याण्डलाई हराउदै अस्ट्रेलियालाई पहिलोपटक टी–२० विश्वकपको उपाधि
क्रिकेटर कविता गौतमको मुहारमा खुसि फर्किदै, सिप्यानले यति लाख सहयोग गर्ने घोषणा
चीनको हा इ प र सो नि क क्षे प्या स्त्रबाट चि न्ति त अमेरिका, उ त्त र को रि यासँग झु क्दै यस्तो गर्न तयार !
३ लाख सैनिक भर्ती गर्न राष्ट्रपति सीकाे निर्देशन, यस्तो कारण थाहा पाएपछि विश्वभर ह ल च ल !
आफुलाई जन्माएको भन्दै युवतीले हालिन डाक्टरलाई मु द्दा, पाईन यति धेरै क्ष ति पु र्ति सबै चकित !
पुरुषहरूले उभिएर पिसाब फेर्नु ठीक कि बसेर ? स्वास्थ्यको हिसाबले कुन राम्रो ?
किन आफूले अभिनय गरेको फिल्म हेर्दिनन् स्वस्तिमा ? यस्तो छ कारण
बिहेमा सहभागी पछि कोरोना संक्रमण एकै घरको ३ मृत्यु - on नेपाल प्रहरीद्धार २ बेहुला पक्राउ गरियो
आमाको चितामा दागबत्तीको तयारी हुँदै अस्पतालमा छोराको मृ’त्यु - on को’रोनालाई जित्न मदनकृष्ण श्रेष्ठले दिए यस्ता सुझाव
आमाको चितामा दागबत्तीको तयारी हुँदै अस्पतालमा छोराको मृ’त्यु - on नेपाल प्रहरीद्धार २ बेहुला पक्राउ गरियो
नेपाल प्रहरीद्धार २ बेहुला पक्राउ गरियो - on बिहे गरेको २ दिनमै श्रीमतिलाई को’रोना पुष्टिपछि लुु’टिएको त्यो खुसी
विवाहमा सहभागी हुँदा गाउँभर नै कोरोना संक्रमित - on नेपाल प्रहरीद्धार २ बेहुला पक्राउ गरियो